E kee mba Burundi ụzọ atọ, ụzọ abụọ bụ ndị ụka Katọlik. Ndị otu okpukperechi katọlik na Burundi ekwuona n’onye isi ala mba ahụ, bụ Pierre Nkurunziza, ekwesịghị ịlọghachị n’ọchịchị. Mba Burundi na-akwado ime ntụli aka maka ịhọpụta onye isi ala n’ọnwa Junu nke afọ a.
Nkurunziza, onye na-achị Burundi kemgbe afọ 2005 ekwubeghị na ya chọrọ iso azọ ọkwa. Kama, ndị na-akwado ya bụ ndị na-ekwu na Nkurunziza tozuru etozu maka iso azọ ọkwa.
Site n’akwụkwọ iwu nke mba ahụ, nanị agba abụọ ka onye isi ala kwesịrị ịchị. Ọchịchị Nkurunziza nọ n’agba nke abụọ ya ugbu a, maka n’ọ batara n’ọchịchị n’afọ 2005. Ọ bụ ezi okwu na Nkurunziza ekwuputebeghị na ya chọrọ ịlọghachị n’ọkwa, mana ndị na-eso ụzọ ya na-akọwa na Nkurunziza kwasịrị ịlọghachi. Ha na-akọwa n’e meghị ntụli aka n’afọ 2005 mgbe Nkurunziza batara n’ọchịchị. Ọ bụ ndị omebe iwu nke mba ahụ bụ ndị họpụtara Nkurunziza sị ya chịwa ha. N’ihi nke a, ha na-ekwu na e kwesịghị ịgụnye agba nke mbụ ya.
Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, onye isi ndị katọlik na mba ahụ, bụ Archbishop Evariste Ngoyagoye, kwuru sị n’akwụkwọ iwu mba ahụ kwuru ho ha sị n’onye isi ala na-ano afọ ise n’ọkwa. Afọ ise ahụ gafee, o nwere ike ịzọ maka agba nke abụọ, chịa afọ ise ọzọ. Nanị afọ iri ka onye isi ala kwesịrị ịnọ n’ọchịchị.